Komandà Tantely Nirina Andriamboavonjy, eny amin'ny lohalaharana rehetra | UNICEF Madagasikara
Komandà Tantely Nirina Andriamboavonjy, eny amin'ny lohalaharana rehetra
Mailo hatrany ny rehetra eo anatrehan’ny ady amin'ny coronavirus. Ny Dokotera komandà Tantely Nirina Andriamboavonjy dia mizara sombim-piainana amintsika ary tsy manadino ny mamporisika ny vehivavy.
Raha fahamafisan-toetra no resahana dia tena ilaina ny fananana izany amin’izao fotoana izao manoloana ity valanaretina coronavirus ity. Ny olona tsirairay, ao amin'ny tontolo misy azy avy, dia samy mizatra araka izay fara heriny mba hiatrehana io aretina io. Izany ihany koa no ataon’i Tantely Nirina Andriamboavonjy, komandà eo anivon’ny tafika malagasy ary mpanampy mpitsabo ao amin'ny sampan-draharaha miandraikitra ny fandidiana ankapobeny sy ny lalan-drà ao amin'ny hopitaly Soavinandriana.
Ho an'ity renim-pianakaviana 39 taona ity, ny andavanandrom-piainany dia tena feno tokoa miaraka amin’ny fifohazana amin’ny 5 maraina izay hanomanany ny sakafo ho an'ny zanany lahy 16 taona sy ny sakaizany. « Mila mandamina tsara ny fotoanako aho raha te-hahazo antoka fa hahavita ara-dalàna ireo zavatra tokony ataoko isan'andro, » hoy ny filazany miaraka amin’ny fanazavana vitsivitsy momba ny antsipirian’ny tontolo androny. « Miala ao an-trano aho ary mandeha fiarakodia mba haka ny entimodin'ny zanako lahy any an-tsekoliny. Aorian'izay dia mankany amin'ny hopitaly aho na mamonjy ny borigady misahana manokana ny covid19. Raha vantany vao tonga any aho dia mandeha ny fombafomba mahazatra rehetra: ny fitsidihana ireo marary sy fanatanterahana fandidiana raha misy izany, ary raha sendra manatontosa ny andraikitra amin’ny maha-mpiandry raharaha aho dia tsy mody raha tsy ny ampitso indray. Ny anjara asa lehibe indrindra amin’izany dia ny famotopotorana momba ireo marary ary koa ny fitiliana izay tanterahina rehefa mahazo antso avy amin'ny foibe fibaikoana ny ady amin’ny covid. Alohan'ny hodiako dia miantsena ho an’ny herinandro aho ary rehefa tonga ao an-trano dia eo no fotoana hahafahako mijery ny devoaran’ny zanako ary miresadresaka kely aminy sy ny sakaizako koa. Soa ihany fa dokotera sy mpandidy ihany koa izy ka azony tsara ny fandaharan’asako », hoy ny fanazavan'i Tantely Nirina, izay manamarika fa ny sakaizany no manao ny asa rehetra ao an-tokatrano rehefa miandraikitra asa mpiandry raharahara izy.
Satria moa ity mpitsabo miaramila ity dia miasa eny amin’ny lohalaharana ao anatin’izao ady atao amin'ny coronavirus izao, dia tena mety ho lasibatry ny valanaretina izy. Ny fampiofanana ara-tafika sy ny hamafisan-tsaina izay ananany dia tena manampy azy amin'ny asany ka hahafahany mihaona sy mikarakara ireo marary. Miezaka miaro tena ihany koa izy. « Alohan'ny hidirako ao an-tranoko dia manala akanjo aho, manasa tanana ary mandro. Apetraka manoloana ny varavarana fidirana ny gel hydroalcoolique sy savony raha misy vahiny tonga mitsidika ao an-tranonay. Ankoatr'izay dia hamarinina ny maripanan'ny olona mamangy anay amin’ny alalàn’ny fitsapana hafanana eo amin'ny handrina. Avy eo indray dia mbola diovina daholo ny finday, famataranandro, solomaso ary ny fitaovana manokana hafa. Amin'ny hariva, tsy hadinoko ny manao dite amin'ny menaka manitra miaraka amin'ny sakamalao sy kanelina. Mihinana legioma sy voankazo isan'andro koa izahay mba hanamafisana ny hery fiarovana. Mihevitra aho fa ilaina ireo fepetra rehetra ireo mba hiarovana tena araka izay tratra, » hoy izy.
Ao amin'ny fiarahamonina malagasy dia maro ny olona talanjona mahita an'i Tantely Nirina Andriamboavonjy am-perin’asa. Izy tokoa mantsy dia vehivavy miaramila izay miasa ao anatin’ny tontolon'ny lehilahy amin’ny ankapobeny, sady hainy ihany koa ny miasa eo amin’ny sehatry ny vonjy taitra.
« Amin'ny asako dia mila manana toetra marobe aho hahafahako mikarakara tsara ireo marary. Voalohany aloha dia tsy maintsy mahazo ny fahatokisan’izy ireo aho. Aorian'izany dia misy fotoana tsy maintsy henjana sy hentitra aho indraindray, kanefa koa mila mihaino azy ireo sy mahatakatra ny fihevitr’izy ireo.. Ny hafatro ho an'ny reny rehetra dia tsotra: Aoka ianareo hirehareha hatrany amin’ny amin'ny maha-reny anareo. Tsy misy andraikitra ambony mihoatra nohon’ny maha-reny. Manoloana ny olana sy ny fanahiana isan-karazany dia mahereza ary mahaiza mitraka hatrany hatrany », hoy izy teo am-pamaranana – vehivavy izay mbola mahavita mikarakara voninkazo sy mahandro sakafo matsiro miaraka amin'ny fianakaviany, na eo aza ny ady maharitra atao amin’ny coronavirus.
Fandraisana andraikitry ny fiaraha-monina